Mygha nke DMP na Ahịa | Martech Zone
Nhazi usoro data (DMPs) bịara na ọnọdụ ahụ afọ ole na ole gara aga ma ọtụtụ na-ahụ ya dị ka onye nzọpụta nke ahịa. N'ebe a, ha na-ekwu, anyị nwere ike ịnwe "ndekọ ọla edo" maka ndị ahịa anyị. Na DMP, ndị na-ere ahịa na-ekwe nkwa na ị nwere ike ịnakọta ozi niile ịchọrọ maka nlele ogo 360 nke onye ahịa.
Naanị nsogbu - ọ bụghị eziokwu.
Gartner kọwara DMP dị ka
Sọftụwia nke na - etinye data sitere n'ọtụtụ isi (dịka nke dị n'ime CRM usoro na ndị na-ere ahịa n'èzí) ma mee ka ọ dịrị ndị ahịa iji wuo ngalaba na ebumnuche.
Ọ na - eme na ọtụtụ ndị na - ere DMP mebere isi nke Ime Anwansi nke Gartner maka Digital Marketing Hubs (DMH) Ndị nyocha Gartner na-atụ anya na afọ ise na-esote DMP ga-atụgharị DMH, na-enye:
Ndị na-ere ahịa na ngwa nwere ohere ịnweta data profaịlụ ndị na-ege ntị, ọdịnaya, ihe ndị na - arụ ọrụ, izipu ozi na ndị nkịtị nchịkọta ọrụ maka ịhazi na ịkwalite mkpọsa multichannel, mkparịta ụka, ahụmịhe na nchịkọta data gafee ntanetị na ntanetị na ntanetị, ma aka ma na mmemme.
Mana emere DMPs na gburugburu otu channel: netwọọdụ mgbasa ozi n'ịntanetị. Mgbe ndi DMP biara na ahia, ha nyere aka weputa webata ihe onyinye kacha mma site na iji kuki iji soro ndi mmadu ihe ha na aru oru. Ha mechara banye na adtech dị ka akụkụ nke usoro ịzụ ahịa mmemme, na-enyere ndị ụlọ ọrụ aka ịzụ ahịa na ụdị nke otu. Ha dị oke mma maka otu ebumnuche a, mana ịmalite ịda mba mgbe a gwara ha ka ha mee ọtụtụ mkpọsa ọtụtụ ọwa nke na-eji igwe na-amụ maka usoro maka ebumnuche.
Ebe ọ bụ na data echekwara n'ime DMP bụ aha, DMP nwere ike inye aka maka mgbasa ozi ịntanetị kewara. Ọ bụchaghị mkpa ịmara onye ị ga-ejere ozi mgbasa ozi n'ịntanetị dabere na akụkọ ntolite weebụ gị gara aga. Ọ bụ eziokwu na ndị na - ere ahịa nwere ike jikọta ọtụtụ data nke mbụ, nke abụọ na nke atọ na kuki etinye na DMP, ọ bụ naanị ụlọ data na ọ nweghị ihe ọzọ. Ndị DMP enweghị ike ịchekwa data dị ukwuu dị ka sistemụ mmekọrịta ma ọ bụ Hadoop.
Nke kachasị mkpa, ịnweghị ike iji DMP iji chekwaa ozi ọ bụla nwere ike ịchọta (PII) - mkpụrụ ndụ ndị na - enyere aka ịmepụta DNA pụrụ iche maka ndị ahịa gị ọ bụla. Dị ka onye na-ere ahịa, ọ bụrụ na ị na-achọ iwere data mbụ gị, nke abụọ na nke atọ gị iji mepụta usoro ndekọ maka onye ahịa gị, mgbe ahụ DMP agaghị egbutu ya.
Dika anyi n’abia n’iru gosiputa itinye aka na teknụzụ anyi n’ime oge Intanet nke Ihe (IoT), DMP apughi iji ya tunyere Ahịa Data Platform (CDP) iji nweta “ihe ndekọ ọla edo” ahụ na-enweghị isi. Ndị CDP na-eme ihe pụrụ iche - ha nwere ike ijide, jikọta ma jikwaa ụdị data ndị ahịa niile iji nyere aka mepụta foto zuru ezu (gụnyere data omume DMP). Agbanyeghị, kedu ogo na otu esi enweta nke a dịgasị iche site na onye na-ere ya na onye na-ere ya.
Ezubere CDP site na ala iji weghara, jikọta ma jikwaa ụdị data dị ike nke ndị ahịa, gụnyere data sitere na iyi egwu mgbasa ozi na IoT. Iji mezuo nke ahụ, ha dabere na sistemụ njikọ ma ọ bụ Hadoop, na-eme ka ha nwee ike ijikwa iju mmiri nke data dị n'ihu ka ngwaahịa ndị ọzọ dabere na IoT na-abịa n'ịntanetị.
Nke a bụ ihe mere Scott Brinker ji kewaa DMPs na CDPs na nke ya Teknụzụ Azụmaahịa Eserese Eserese. A na-akpọ ya na akara ngosi ya nke 3,900 + nke eserese bụ ngalaba abụọ dị iche iche na ndị na-ere ahịa dị iche iche.
Na ya dee elu-akpọsa ihe ngosi, Brinker kwuru n'ụzọ ziri ezi na Otu nyiwe iji chịa ha niile echiche abughi ezi nkpuru, ma ihe dị kama bụ ịjikọta ọnụ nke nyiwe iji rụọ ọrụ ụfọdụ. Ndị na-ere ahịa na-agagharị na otu ngwọta maka email, ọzọ maka weebụ, ọzọ maka data na ihe ndị ọzọ.
Ihe ndị ahịa chọrọ abụghị nnukwu ikpo okwu nke na-eme ya niile, mana usoro data na-enye ha ozi ha chọrọ iji mee mkpebi.
Eziokwu bụ, na Brinker na Gartner na-emetụ ihe na-amalite amalite ịpụta: ezigbo ikpo okwu nhazi. Ewubere na CDPs, a haziri nke a maka ezigbo ahịa omnichannel, na-enye ndị na-ere ahịa ngwaọrụ ha chọrọ iji mee ma mezuo mkpebi ndị data na-eme n'ofe ọwa niile.
Dị ka ndị ahịa na-akwadebe maka echi, ọ ga-adị ha mkpa ịme mkpebi ịzụ ihe gbasara nyiwe data ha taa nke ga-emetụta otu esi eji ha n'ọdịnihu. Họrọ amamihe ma ị ga-enwe usoro ikpo okwu nke ga - enyere aka ijikọ ihe niile ọnụ. Họrọ emezighị emezi ma ị ga-alaghachi na square otu n'ime obere oge.
Tags: onye obiacdpCRMAhịa Data Platformnhazi usoro njikwa dataulo oru ahia dijitalụdmhdmpgartnerahịa teknụzụ ahịaOtu nyiwe iji chịa ha niilescott brinker